Ohabolana Atao vikin’ alina : aleo miohatra toy izay ho latsaka. [Cousins 1885, Nicol 1935]
Ohabolana Aza manao tahaka any ilay kamo : voky antoandro, entiko matory aza izany; voky alina, entiko miasa aza izany. [Cousins 1885 #506]
Ohabolana Aza manao tokin-tsabakaka : raha antoandro manidy trano, fa raha alina vao mandehandeha. [Cousins 1885 #519]
Efa lany rambo toy ny jono indray alina. [Houlder 1895 #973, Veyrières 1913 #2490, Cousins 1885 #866]
Ohabolana entan--draty roa fehy : aiditra atosik' efa-dahy ; ataina, tsy mahaloaka alina. [Veyrières 1913 #5898, Cousins 1885 #872]
Lozai-manan-anaka, toa sorohitra : tenenin’ alina vao lanim-biby, fofoina halaina lasan’ olona. [Cousins 1885 #1386]
Manao azy ho akan’ ny dia, ka mitsipy sandry maizim-bolana. [Cousins 1885 #1529]
Ohabolana Mangahazo anaty tenona: mitondra lefona an-kibo, miferin-aina andro aman-alina, velona fa manana aina. [Veyrières 1913 #2618, Cousins 1885 #1612]
Maty ny mpiamhina, ka tsy misy mpitomany alina. [Cousins 1885 #1666]
Mitsotra alina, mivonkona antoandro, toa sokina. [Cousins 1885 #1910]
Sakafom-borondolo: ny alina no miantoka ny andro. [Cousins 1885 #2828]
Ohabolana Toha-bary tsindrian-tsovok' alina : miandro mialina ihany. [Veyrières 1913 #3144, Rinara 1974 #4146, Cousins 1885]
Ohabolana Toha-bary tsindrian-tsovok' alina : voaka ampinga no tsy natao, fa ny fo dia miramirana. [Veyrières 1913 #3145, Cousins 1885 #3104]
Tolo-kena maty alina : vintana no andrasana. [Cousins 1885 #3112]
Tolo-kena maty jiro : vintana no andrasana. [Cousins 1885 #3112]
Voalavo mandositra andro : mahin' ny fanahy ratsy natao halina. [Cousins 1885 #3691, Veyrières 1913]
Ohabolana Voalavo mihazakazaka alina : tsy ny lalana no mahamaika, fa ny fanahy ratsy atao andro lava no mahamaody. [Veyrières 1913 #4333, Cousins 1885 #3692]